/Blog/Gallery/Fanamarihana momba ny Oxymetholone: ​​Ny toro-làlana farany amin'ny Oxymetholone (Anadrol)
Posted on 01 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Tsy mahagaga raha ny bodybuilding dia iray amin'ireo henjana indrindra izay mety ho tafiditra ao anatin'izany. Na izany aza, raha tsara ny vokatra, ny fampiofanana ary ny sakafo, dia manome valisoa ho an'ny ampahany roa izany. Raha ny tena izy, ny fampiakarana herim-batana sy fiofanana irery dia mety tsy hanome anao ny vokatra tsara mety ho anao, izay maro no mihevitra azy io. Oxymetholone (Anadrol) dia iray amin'ireo vokatra azonao ampiasaina hanovana ny diabeta nataonao ka mahatonga azy io ho traikefa mahafa-po indrindra eo amin'ny fiainanao.
Ny zavatra iray hafa dia satria rehefa mihantitra ianao, dia mihena ny famokarana hormonina ao amin'ny vatanao toy ny Testosterone ary ianao irery sisa no safidy miankina amin'ny dikan-teny mampiavaka azy io. Ny fehin-kafatra tahaka ny Testosterone ao amin'ny vatana ary ny vintana dia ny manome tombontsoa bebe kokoa noho ny farany. Tsy vitan'ny hoe mahita fandrosoana eo amin'ny vatanao ianao, fa indrindra indrindra aza dia hahatonga anao handresy lembalemba ara-batana izay mety ho sarotra aminao amin'ity dia ity.
Raha mieritreritra hiaina fomba fiaina kanto ianao, dia tokony handray an'i Anadrol ianao satria hanampy anao hampitombo ny volanao sy ny tanjanao. Hatreto dia te-hahalala bebe kokoa momba ny Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1). Hahazo ny fampahalalana rehetra momba azy ao anatin'ny iray minitra.
Inona ny Oxymetholone (Anadrol)?
Oxymetholone no anaran'ilay anarana hoe Anadrol 50 izay tena steroide anabolic androgenic. Manontany tena ny dikan'ny hoe "50"? Mampiseho ny milligrams izy io amin'ny famoahana ity steroid ity. Ireto ny anaran'ny anaran'i Anadrol;
Tao amin'ny 1960, ny orinasa famokarana pharmaceutique dia nanangana Anadrol. Ireo orinasa ireo dia Zoltan, Syntex, ary Park Davis. Tamin'ny lasa, nampiasaina tamin'ny fanamafisana ny famokarana sela mena amin'ny olona izay mijaly amin'ny anemia. Nampiasaina koa izy io mba hampitomboana ny fiankinan-doha, hanampy amin'ny fanamafisana ny taolana sy hiadiana amin'ny hozatra. Ny fianarana natao nandritra ireo andro ireo tamin'ireo marary izay nahitana ny SIDA nandritra ny telopolo herinandro ary ny vatany dia nitety renirano, dia nanaporofo fa ity steroid ity dia nanampy azy ireo hahazoana kilo kilao farafahakeliny amin'ny faran'ny fianarana.
Taorian'izany dia tsapan'ny olona fa azo ampiasaina amin'ny tanjon'ny fambolena izany. Ny bodybuilders dia nanomboka nampiasa izany mba hahazoana vatana lehibe kokoa. Androany Oxymetholone (Anadrol) (čas 434-07-1) dia heverina ho toy ny iray amin'ireo steroïde steroids miora indrindra ao amin'ny tsena. Tsy mahagaga raha afaka manampy amin'ny fananganana hozatra lehibe indroa toy ny steroid hafa. Ny an'ny anabolika amin'ny androgenic dia 350: 55. Ny bodybuilder rehetra izay nampiasa izany dia afaka manamarina fa ity steroid ity dia endrogenic kokoa noho izay ao anatin'ireo tarehimarika ireo.
Ny zavatra iray hafa izay mahatonga azy io ho toy ny steroid iombonana eo amin'ny olona maro dia ny hoe azo alaina am-bava izany. Satria ity dia steroid 17aa izay midika fa miova endrika amin'ny 17 izy ioth Ny atoma dia azo alaina am-bava.
Oxymetholone dia tena mahery vaika anabolic steroid izay ny heriny dia mahery fa ity medikaly ity dia heverina fa avo telo heny noho ny testosterone. Inona indray no tianao ho an'ny steroid anabolic?
Oxymetholone (Anadrol) hetsika hetsika
Oxymetholone dia antenaina testosterone izay manana anabolika avo kokoa ho an'ny androgenic activity. Izany dia miasa amin'ny fifandraisana amin'ny receptors cytoplasmic testosterone amin'ny tavy sy taova izay androgen dia mamaly ny famoronana hormone-receptor complex. Ny hormone-receptor complex dia mifandray amin'ny ADN toy ny fampiroboroboana ny transkòna ADN sy ny formation mRNA izay manitatra ny synthesis ny proteinina.
Ankoatra izany, ny Oxymetholone dia miteraka vokatra anabolika eo amin'ny hozatry ny taolam-paty sy ny taolam-paty ary manaparitaka ny erythropoiesis. Ankoatra izany, io fanafody io dia mampiasa fanafody ara-panafody amin'ny vatana amin'ny fampiakarana ny haavon'ny erythropoietin izay manampy amin'ny famokarana sela mena. Manatsara ny fifandanjana azota ao amin'ny vatana sy amin'ny fampiroboroboana ny fitehirizana rano.
Inona ny Oxymetholone ampiasaina amin'ny fambolena?
Oxymetholone Manana tombontsoa be dia be izy io eo amin'ny latabatra. Ireto ny sasany amin'izy ireo;
Manatsara ny fiasan'ny proteinina izy io- Ny fitomboan'ny hozatra dia vokatry ny fampidiran-drazy proteinina satria izy no fotodrafitrasa lehibe ao amin'ny hozan'ny vatana. Raha vantany vao miasa ianao dia misy ny fiarovana proteinina hozatra izay mamerina ny fitomboan'ny taova. Mba hampitombo ny habetsaky ny hozatrao, ny vatana dia tsy maintsy manana firaisana proteinina marobe kokoa noho ny fahapotehana, ary amin'ny Oxymetholone mampiroborobo ny proteinina dia misy ny fananganana hozatra lehibe kokoa.
Manatsara ny famokarana sela mena izany- Ny sela mena dia miantoka ny hozatry ny hozatry ny hozatrao, noho izany dia miteraka reradreraka izany. Ho afaka hanao asa tsara kokoa ianao amin'izay, tsy hijaly noho ny reraka loatra ka mahatonga ny hozatra tsaratsara kokoa. Ny bodybuilder dia mandray soa amin'ny fiaretana bebe kokoa satria izy dia afaka manofana mafy mandritra ny herinandro.
Mampitombo ny fihazonana azota ny Anadrol- Ity steroid ity dia afaka mampitombo ny habetsin'ny azota izay azonao omanina. Ny tombony amin'izany dia ny famatsiana sakafo bebe kokoa ho an'ny hozanao ka mahatonga azy ireo hitombo sy hihatsara ny fahasitranana rehefa vita.
Miaro ny hozany izy rehefa mihintsana- Tsy misy olona te hamono ny hozatra izay niasainy nandritra ny fotoana fanarenana. Ny ataon'i Anadrol dia ny manafika sy manimba ny vatana mangatsiaka ao amin'ny vatana nefa tsy manimba ny hozany. Rehefa tapaka ny fôsina manodidina ny hozany, dia hozongozonina sy hentitra ny hozany. Ho an'ny fitombon'ny sarotra sy matanjaka dia miantsoa Oxymetholone (Anadrol) 434-07-1.
Mampitombo ny filan'ny nofo izanyNy mpamboly dia mila milanja kalozia maro ho an'ny vatana mba hahafahany manangana hozatra. Saingy tonga ny olana rehefa iharan'ny tsy fahampian-tsakafo haka ny kaloria ilaina. Oxymetholone dia hanome anao ny fiankinan-doha ampy izay hampitombo ny fitomboan'ny kaloriao.
Ampitombo ny fiatoana herinaratra- Anadrol dia hampitombo ny herinao, tombontsoa iray izay tena tsara ho an'ireo mpanefy vy.
Mitondra lehibe ny fitomboan'ny hery ao amin'ny vatana- Mampitombo hery ny oxymetholone ary raha mitady zavatra hanampiana anao hikolokolo bebe kokoa sy ny soroka ianao dia azo antoka fa eny amin'ny làlana marina. Mandeha amin'ny alàlan'ny fanamarihany, ity rongony ity dia voalaza fa hampiakatra ny heriny amin'ny heriny.
Mampivelatra ny hozatry ny hozatra- Betsaka ny mpanao biriky no nanandrana mahazo ny hozatra tsy misy ilàna azy. miaraka Oxymetholone, tsy mila miezaka mafy mafy ianao. Rehefa manomboka manaparitaka ireo pills ireo ianao, dia afaka manantena hahazo tombony mandritra ny roa volana latsaka. Ny ampahany tsara indrindra momba ny fampiasana io zava-mahadomelina io dia tsy voatery miandry ela loatra ianao hanomboka hanamarika fa mihamitombo ny hozatrao. Amin'ny herinandro faharoa dia ho hitanao ny fahasamihafana.
Mihetsika haingana izany vokatr'izany- Raha tsy mety ianao raha manam-paharetana, dia ho takatrao fa ity steroid ity dia manome valiny tonga lafatra ao anatin'ny fotoana fohy. Izany dia hikaroka anao ny vatanao izay mamela anao hanatontosa ny tanjon'ny vatanao ao anatin'ny latsaky ny herinandro.
Manatsara ny fahombiazany-Ankoatra ny fananganana ny hozatry ny fanatanjahan-tena, Anadrol dia manome lanja goavana amin'ny fampisehoana. Vokatr'izany, ny bodybuilders sy ny atleta dia afaka mahazo haingana avy amin'ny fiofanana. Noho izany, afaka manofana mafy kokoa izy ireo ary matetika kokoa.
Manampy amin'ny fitomboan-karena- Raha te-hahatonga ny vatanao hitodika kokoa sy hanaitra kokoa dia tokony handinika izany Oxymetholone ho an'ny fahazoana mavesatra. Maro ireo olona nampiasa azy io no nitatitra fa nanampy azy ireo hahazoana tombony tampoka. Ny fametrahana 20-30 pounds ao anatin'ny 4-6 herinandro dia tsy sangisangy, ary efa nanaporofo fa mbola betsaka noho izany i Anadrol.
Hampitombo ny faharetana- Ny fahafahana mikaroka ao amin'ny fampiharana na ny fiofanana mandritra ny fotoana maharitra dia zavatra iray tadiavin'ny bodybuilder. Ny iray amin'ireo vokatra Oxymetholone dia manosika ny herinao izany mamela anao hampiofana ny vatanao raha toa ka te-hitarika mankany amin'ny fananganana betsaka ianao.
Mifamahofaho ny fiaraha-miasa- Izany fanaintainana izany dia mety hahatonga ny iray tsy hankalaza ny endriny ary na dia fantatry ny Anadrol aza ny hamolavola hery sy tanjaka ho azy, dia mitana anjara toerana lehibe ihany koa amin'ny fanolorana ny felam-paty ho fahatsiarovan-tena noho ny fihenan'ny fiaraha-misakafo. Tsy hanana fialan-tsiny intsony ianao raha tsy manatsara ny vatanao matetika araka izay tianao.
Ny fakana ny Anadrol 50 dia tsy manome antoka ny vokatra tsara anao. Tokony handray dosie tsara ianao raha te hahatsapa vokatra tsara. Ankoatr'izany, ny fanafarana ny dosie mety dia miaro anao amin'ny mety ho fiantraikany amin'ny voka-pifandraisana mifandraika amin'ny fanaovana diso Anadrol dosage. Na izany aza, ny dosie Anadrol dia miovaova avy amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa arakaraka ny tanjon'ny iray.
Raha mifanohitra amin'ny fanafody sasantsasany izay manome ny fiovana azonao amin'ny dingana samihafa amin'ny tsingerina, ny Anadrol dia manana tahirin-tsarin'ny 50mg isan'andro. Ny mpandidy dia mety manomboka amin'ny doka izay ambany ambany amin'ny 25mg-50mg, ary raha afaka mandefitra ny zava-mahadomelina ny vatany, dia afaka mampitombo ny fihinanana azy ireo izao.
Olona maro no mandiso fanantenana amin'ny fisainana zava-mahadomelina fa hampitombo kokoa ny faniriany. Na izany aza, tsy izany no mitranga amin'ny Anadrol. Mivadika ho fiovana izy io satria manakana ny fialan-tsasatry ny olona iray indray mandeha. Ankoatra izany, dia alefa ny olona iray tsy mandray fanafody avo lenta ity satria mety miteraka fanafody mahery vaika izany.
Raha te-hanangona kely kokoa ianao, dia azonao ampitomboina ny dosage amin'ny 100mgs. Na izany aza, dia manoro hevitra ianao fa tsy hanao izany raha tsy afaka manaiky izany ny vatanao. Aza manao fahadisoana mihoatra ny 150mgs satria tsy ho tsara ho an'ny aty aminao izany. Mety hitarika amin'ny fihenan'ny faniriana koa izany, ary midika izany fa tsy afaka ny mihinana araka ny nampiasanao azy mba hampihenana ny fivoaranao.
Oxymetholone (Anadrol) sy ny doka
Bilaogera maro no maniry ny fampiasana an'i Anadrol amin'ny faribolan'izy ireo amin'ny tanjona hanatsarana ny asany. Ireto ny sasany amin'ireo cycles izay ankafizin'ny ankamaroan'izy ireo;
Ilaina ny roa ambin'ny folo herinandro.
Herinandro 1 isan-kerinandro 6- Raiso ny 25-50mg an'ny Anadrol isan'andro
Week 1 isan-kerinandro 12- Raiso 300-500mg ny Testosterone Enanthate isan-kerinandro.
Ity dia iray amin'ireo cyber Anadrol mpandrindra an-tsarimihetsika izay ahitana ny Testosterone ao anatin'izany ary ao amin'ny dose avo izay hahatonga ny efaina ilaina anabolika. Etsy an-daniny kosa, i Anadrol dia eo amin'ny doka mahazatra izay manoro hevitra ny mpikamabana handray.
Na dia ao anatin'ity fiaramanidina ity aza, dia tsara ny mitondra siramamy toa ny Nolvadex na tsimok'aretina aromatase noho ny karazana haingam-piaramanidina avo lenta ity. Ho an'ny mpikirakira rehetra izay te-hampiakatra azy, ity no lalam-piaramanidina Anadrol tsara indrindra handehanana.
2. Ho an'ny mpampiasa mpampiasa
Week1 isan-kerinandro 6- Raiso ny 50mg an'ny Anadrol isan'andro.
Week1 isan-kerinandro 12- Take 400mg of Deca Durabolin (Nandrolone Decanoate) isan-kerinandro.
Ataovy koa ny 100mg testosterone Enanthate isan-kerinandro.
Araka ny efa tsapanao, misy fiovana vitsivitsy amin'io fihodinana io raha oharina amin'ny voalohany. Ity cycles ity dia tsy anabolika voalohany, ary ny tanjona voalohany amin'izany dia ny fampihenana ny fitomboan'ny hetsika etrogenika mandritra ny diany mandritra ny fampiasana zava-mahadomelina toy ny Anadrol.
Tonga soa i Deca Durabolin amin'ity vaninandro ity rehefa tapitra ny fampiasana an'i Anadrol satria anabolika izy io. Ao anatin'ity faran'ny Anadrol ity, ny dosage dia nihena hatramin'ny 50-100 mg isanandro mba haka ny 50 mg isan'andro. Satria ity anabolika ity dia tena anabolika. Noho izany, tsy mila fampitomboana ny dosage Anadrol. Ho an'ny habetsahana na tanjaka, ny dosage amin'ny 50mg dia mihoatra noho ny ampy ho an'ny mpampiasa iray mahazatra.
3. Ho an'ireo mpampiasa misandratra
Ilana valo herinandro izany.
Herinandro 1to herinandro 8- 100mg an'nyAdidrol isan'andro
Raiso 25mg amin'ny Testosterone Propionate isaky ny andro hafa amin'ny 100mg isan-kerinandro
Raiso 100mg Trenbolone Acetate isaky ny andro hafa amin'ny 400mg isan-kerinandro.
Ny fahasamihafana eo amin'ny fiovan'ny toetr'andro miaraka amin'ny hafa dia ny fandaniana fotoana fohy. Anisan'izany ny steroïde izay fohy fohy toy ny Trenbolone Acetate sy Testosterone Propionate. Ny fampiasana azy dia voafetra amin'ny herinandro enina, ary tsy mety ny mampiasa azy io mandritra ny fotoana maharitra kokoa noho ny haavo haingana amin'ny 100mg isan'andro.
Ny ampahany tsara indrindra momba ny dosie ambony Anadrol dia ny fahafahana manome tanjaka matanjaka sy fampiroboroboana maro, indrindra rehefa tafaraka amin'ny Trenbolone Acetate.
Ity sori-dàlana ity dia soso-kevitra fotsiny ho an'ireo mpampiasa misandratra satria mety hitarika ho an'ny olona mahazo hery sy halatra tafahoatra izay mahatonga ny ratra amin'ny mpampiasa hafa.
Anadrol 50 dia manome fahafaha-manao zavatra betsaka araka izay azonao atao mba hahafahanao mampiasa azy manokana na haka azy miaraka amin'ny steroids hafa.
Anadrol fotsiny sik- Amin'ny alalan'io vanim-potoana io, dia mety hahita vokatra tsara ianao. Na dia mety hanapa-kevitra ny haka, dia tsara ny misafidy ny steroids azonao esorina mba tsy hisondrotra ny vokatra hafa. Raha toa ianao ka liana amin'ny fametrahana ny fomba azo antoka indrindra, dia izao no fomba ahafahanao manao izany;
Mampiasà anabolika marefo- Tsara ny mampitovy azy amin'ny steroids anabolic marea toy ny SARMS, Equipoise, Primobolan, ary Deca Durabolin.
Aza atsofoka amin'ny steroids androgenic amin'ny doses tena avo-Raha mametaka amin'ny steroids toy ny Testosterone na Trenbolone izy io, dia tokony tsy hiala amin'ny dosie Anadrol mihoatra ny 200mg ianao.
Aza asongadina miaraka amin'ny DHT derivatives- Ny fametrahana Anadrol amin'ny steroid toy ny Masteron sy Winstrol dia hanao ratsy bebe kokoa noho ny tsara. Mety ho azonao ny tombony azonao, fa ny vokatra hafa dia tsy azo ihodivirana. Raha misy olona voakasika amin'ny Winstrol, dia nisy ny tatitra momba ny fihenan'ny volo.
Aza asongadinao amin'ny steroid hafa izay mahatonga ny aretina amin'ny aty-Aza mitsambikina amin'ny steroids amin'ny orona satria mety hiteraka olana toy ny jaundice izy ireo.
Aza mijanona ela be-Amin'ny fotoana fijanonana amin'ny fametahana herinandro maromaro, tsara ny manamarika fa ny fotoan'ny fampiasana sy ny avo kokoa ny dosage azonao, vao mainka miharatsy ny vokany.
Tokony horaisina amim-pahendrena ny kitapo Oxymetholone ary tsy hanararaotra ny zava-mahadomelina.
Satria Anadrol dia iray amin'ireo steroids anabolika matanjaka indrindra any an-tsena, tsara ny manana fitsaboana tsara amin'ny fitsaboana vonjimaika. Ny tanjona amin'izany dia ny hamela anao hitazona ny tombony azonao. Tsy ho rariny ny hamoy ny zava-drehetra izay azonao aorian'ny fisehoan-javatra, sa ve izany? Ankoatra izany, ny PCT dia manampy anao hisoroka ny fiantraikany mety ho vokatry ny fanafoanana ny famokarana testosterone.
Koa satria ny antsasak'aretina fohy dia mora ary anterina fohy, tokony hanomboka ny PCT ianao telo andro aorian'izay vao mahazo ny dosie farany raha ampiasainao irery. Raha toa ianao ka mametraka azy amin'ny steroid rehetra izay efa ela, dia tokony hanomboka ny PCT 14-18 andro aorian'ny famoahana ny dosie farany anao. Ny Nolvadex na Clomid dia hanampy anao amin'ny fanombohana ny famokarana voa-testosterona eo amin'ny vatanao. Ity misy fomba iray entina handraisana ireo zava-mahadomelina;
Weeks Nolvadex / isan'andro Clomid isan'andro
The Valin'ny Anadrol dia tsara, saingy indraindray dia afaka mitarika vokany mahatsiravina izy ireo. Ny ankamaroan'ny voka-dratsin'ny Anadrol dia azo atao ary handalo indray mandeha rehefa vita ny fanalana azy ireo.
Mitadiava ny fijerin'ny dokotera raha toa ianao ka mahazo ny marika famantarana noho ny fihetsika tsy mahazatra;
Fanimbazimbana ny tenda, lela, molotra, ary tarehy
Ny fiantraikany eo amin'ny tsindrim-peo anadrol vokatry ny fampiasana azy mandritra ny fotoana lava dia ny cysts ra misy ranomanitra na aty. Mety hiteraka tsiran-drivotra ihany koa izany.
Antsoy ny dokotera raha manana izany ianao;
Valan-java-maneno ny maso sy ny hoditra.
Ny fihenan'ny tongotra sy ny tanana
Fiovana amin'ny loko hoditra
Fahavetavetana eo amin'ny nonony
Ny fandosirana (fanesorana ny tsinay na ny orin-doha) na ny fanenjehana mora, ny fandehanana tsy misy fijanonana
Ny fiheverana mahaliana amin'ny fanaovana firaisana, dia mampihena ny habetsaky ny tsiranoka novokarina amin'ny ejaculation, ny olana mitranga amin'ny orgasme sy ny tsy fahampian-tsakafo
Mahatsiaro ny fanaintainan'ny penis rehefa miverina izy
Hery sy fahasalamana
Ny vehivavy izay mampiasa Oxymetholone dia mety hampivoatra ny endriny amin'ny lahy sy ny vavy ary tokony hajanony ny fampiasany rehefa tonga izy ireo na mitady ny torohevitry ny dokotera. Anisan'izany;
Ny fihenana na ny fahalianana amin'ny firaisana ara-nofo
Fiovana amin'ny vanim-potoan'ny reny
Fampitomboana ny clitoris
Mihamafy ny volom-behivavy
Ny fitomboan'ny volo eo amin'ny tratra
Fanamafisam-peo na haingana
Ny fiantraikan'ny zava-manan'aina eo amin'ny lahy sy ny vavy dia misy;
Olana momba ny torimaso (Insomnia)
Ny fihenjanana sy ny fitiavana (na lahy na vavy)
Maninona no azo antoka ny Oxymetholone (Anadrol)?
Azo antoka ve ny Anadrol? Ity fanontaniana ity dia manasongadina ny sainin'ny olona maro liana amin'ny fakana ity zava-mahadomelina ity. Ny Anadrol 50 dia azo antoka raha raisina tsara, nefa mety tsy hisy izany raha toa ianao ka mijaly amin'ny iray amin'ireto fepetra manaraka ireto;
Raha toa ianao ka misy fanafody fitsaboana ra toy ny Jantoven, Coumadin, Warfarin
Ny fandehanan-tongotra na manana ra mandoza
Cholesterol avo na triglycerides
Ny aretim-po, ny tsy fahombiazan'ny fo
Ny fihenan'ny pneoma na ny voa
Voan'ny kanseran'ny nono amin'ny alàlan'ny calcium betsaka ao amin'ny ra
Anadrol dia tsy misy fiarovana ho anao raha bevohoka ianao. Mety hanimba ny zanakao tsy manan'anaka izany ary mety hitarika ho amin'ny fahaterahana. Raha sendra bevohoka ianao raha mbola mampiasa io fanafody io dia jereo ny dokotera avy hatrany. Manoro hevitra ihany koa ianao mba hampiasa fomba mahomby amin'ny fiterahana rehefa mampiasa io fanafody io.
Io fanafody io dia mety hanova ny fahavokarana ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy ary tokony horaisina amim-pahamalinana.
Ny fianarana mikasika ny fandehanana an-tsokosoko amin'ny zaza tsy ampy taona amin'ny alàlan'ny rononon-jaza dia mbola tsy vita, ary tsy fantatra raha mety hiteraka fahavoazana izany. Raha mampiasa io fanafody io ianao, aza misotro ny zaza vao teraka.
Tsy tokony hampiasa io fanafody io ny olona, ​​valo ambin'ny folo taona, satria mety hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny taolany izany.
Buy Anadrol avy amin'ny tranokalantsika ary avotsotra izany. Ity no fomba amaranao anay;
Azonao atao ny miangavy anao amin'ny alàlan'ny mailaka, solontenan'ny mpanjifanao, Skype aty anaty aterineto na amin'ny alalan'ny rafitra fanadihadiana mailaka.
Mba hahafahanao manompo anao tsaratsara kokoa, manome izay ilaina rehetra momba ny lamina, izany hoe ny adiresinao sy ny habetsanao hividy.
Ny solontenan'ny mpanjifanay dia miverina any aminao ary manome anao ny fomba fitaterana, ny antom-pifidianana (ETA), ny laharan-tariby, ny teny nindramina ary ny teny fandoavam-bola izay tena mety.
Raha vantany vao nandoa ny baikonao ianao, dia alefa any aminao mandritra ny roa tolakandro ny entana (Izany dia ho an'ny didy rehetra mihoatra ny folo kilao).
Tsy ara-dalàna ve ny Oxymetholone (Anadrol)?
Ny ara-dalàna amin'ny fampiasana, fivarotana ary fividianana Oxymetholone dia miovaova avy amin'ny firenena mankany amin'ny firenena. Ohatra, any Grande-Bretagne, Kanada ary Etazonia ny fampiasàna an'io zava-mahadomelina io dia azo atao, fa voarara ny fanondranana olona an-tsokosoko. Mba hisorohana ny fitadiavanao ny olana, mandinika raha afaka mamela ny fampiasanaAnadrol ny firenenao.
Ao amin'ny ankamaroan'ny firenena, dia azonao atao amin'ny alalan'ny ordinatera fotsiny izy io fa tsy misedra olana amin'ny azonao an-tserasera.
Aiza no mahazo ahy Oxymetholone (Anadrol)?
Rehefa manao zavatra ianao bodybuilding, mety ho hitanao fa tsy mahafa-po ny fitomboan'ny hozatry ny hozatrao. Na dia efa vitanao aza izay rehetra azonao atao, dia mety ho diso fanantenana ianao fa tsy tonga any amin'ny toerana tianao. Indraindray, mety hitanao fa be dia be ao amin'ny vatanao. Ny fasika toy izany dia hanafina ny hozatrao, ary mety hahita ny tenanao rehetra ianao.
Rehefa ao anatin'ny toe-javatra toy izany dia aza manalasala ny manontany tena hoe inona no manaraka. Andro izay tsy maintsy anontanianao ny olona rehetra ao amin'ny toeram-pisakafoana mba hahazoana fitaovana hananganana ny hozatrao. Amin'izao fotoana izao, mivezivezy amin'ny aterineto ianao, ary afaka mahita ny tranonkala rehetra mivarotra ny steroids amin'ny aterineto. Nefa ahoana no ahafantaranao ny tranonkala tsara indrindra hividianana azy?
Tahaka izay steroid rehetra nividiananao, ilaina ny mividy Anadrol 50 avy amin'ny loharano azo antoka. Azonao antoka fa ho azonao ny vidin'ny Oxymetholone tsara indrindra sy ny kalitaony. Miaraka amin'ny aterineto misy mpitsikera marobe amin'ny anaran'ny mpivarotra, mety hianjera amin'ny tranokala izay mivarotra karazam-panafody sandoka na aretina miteraka. Mety tsy hisy fiantohana azo antoka ny fitsaboana anabolic anabolic sasany, ary mety hiteraka vokany ratsy eo amin'ny vatanao izany. Ny tena oxymetholone aloha sy aorian'ny valiny dia toy ny teboka roa miavaka, ary izany dia tokony ho ilay toe-javatra indray mandeha manomboka mampiasa ity steroid ity.
Ao amin'ny tranokalanay AASraw.com, afaka ho Anadrol ianao izay madio sy madio. Ny vidin'ny oxymetholone dia pocket-friendly, ary amin'ny maha-ara-drariny azy dia azonao antoka ny hahazoany valiny tsara ho an'ny Anadrol sy ny vokatra farafahakeliny Anadrol. Omeo anay anio ary hanova ny vatanao amin'ny zavatra tianao.
Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (1984). "Ampifandraisina akaiky amin'ny steroids anabolic-androgenic: ny fampitahana ny fatorana amin'ny receptors androgen ao amin'ny musculaire skeletal sy amin'ny prostate, ary koa ny globulin ho an'ny hormone-binding gonona". Endocrinology. 114(6): 2100-6.
Pavlatos AM, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A, Pharmd (2001). "Review of oxymetholone: ​​a steroid anabolic-androgenic 17alpha-alkylated". Clin Ther. 23(6): 789-801.
Zderic, John A .; Carpio, Humberto; Ringold, HJ (Janoary 1959). "Steroids. CVI. Famintinana ny Analogie an'ny hormonenan'ny 7β-methyl ". Journal of American Society Society. 81(2): 432-436.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny dianabol-poopy Top Benefits Winstrol 15 Izay Ilainao Fantatra Alohan'ny Buy Winstrol Online